Batariga - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
Ku-dallaca wireless-ka ku shaqeeya Android: Muxuu yahay iyo moodooyinka ku habboon ee ku habboon?
Ka ogow dhammaan waxyaabaha ku saabsan lacag-bixinta wireless-ka ee Android, waxa ay tahay iyo sida ay u shaqeyso marka lagu daro taleefannada ku habboon.
Sida loo ogaado haddii aad u baahan tahay inaad beddesho batteriga taleefankaaga Android
Raadi wax badan oo ku saabsan sida aad u hubin karto xaaladda batterigaaga taleefankaaga Android mahadsanid codsi.
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan go'aanka OnePlus ee ku darista lacag la'aanta wireless-ka taleefannada ay bilaabayaan sanadkan.
Soo ogow siyaabaha aad dib ugu bilaabi karto moobilkaaga Android-ka ah haddii aad mobiil ku haysato batariga aan lagaran karin qaab aad u fudud.
Talooyin ku saabsan in baterigu kaa dhammaan intaad safraysid
Soo ogow khiyaamadan si aadan uga bixi doonin batteriga taleefankaaga Android inta lagu guda jiro ciidahan soo socda ee Ciida
Soo ogow dhinacyadan ku saabsan batteriga ay tahay inaad tixgeliso marka aad u socoto inaad iibsato taleefan cusub oo Android ah.
Raadi wax badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee baytariyada ee hadda ku jira Android, oo lagu daray xoogaa hadda ku jira horumar.
Sida loogu kordhiyo batteriga ku jira Android sixitaan fudud
Soo ogow hagaajinta fudud ee xulashooyinka horumariyaha oo noo oggolaan doona inaan yareyno isticmaalka batteriga taleefannadeenna Android.
[APK] Sida loogu dhaqaajiyo mowduuca mugdiga ah ee Gboard marka keydiyaha batteriga la adeegsanayo
Nooca ugu dambeeya ee Gboard, mawduuca mugdiga ah ayaa hadda si otomaatig ah loo hawl gelin karaa markii la doorto habka keydinta batteriga Android.
Sida loo ogaado mudada uu batteriga Android ku qaadanayo in lagaa qaado. Raadi wax badan oo ku saabsan labada hab si aad u ogaato waqtiga aad u baahan tahay.
Sida loo kaydiyo batteriga ku jira Android intaad isticmaaleysid WiFi. Tabaha lagu cuno batteriga yar inta aad isticmaaleysid WiFi taleefankaaga Android.
Android 8.1. Oreo ayaa kuu digi doonta haddii barnaamijku batteriga ka baxayo
Android 8.1. Oreo ayaa kuu digi doonta haddii uu jiro codsi ku saabsan taleefankaaga oo daadinaya batterigaaga. Soo ogow sida.
Talooyin si aad u daryeesho batterigaaga Android oo lagu daro barnaamij cajiib ah
Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha si aad u daryeesho batterigaaga Android oo lagu daray codsi aad u faa'iido u leh in lagu maareeyo lacagtiisa.
Xaqiijiyay! Moto Z2 PLay wuxuu yeelan doonaa batari 3.000 mAh ah
Shirkadda Lenovo waxay xaqiijineysaa in Moto Z2 Play uu ku imaan doono batari 3000 mAh ah, boqolkiiba 17 ka yar awood ahaan qaabkii hore
Kuwani waa taleefannada casriga ah ee Android oo leh nolol batari ee ugu fiican
Maanta waxaan kuu keenay xul xul ah qaar ka mid ah taleefannada gacanta ee Android oo bixiya nolol batteri oo dheeri ah iyo ismaamul dheeri ah
Gionee M6S Plus, casriga oo wata batari dhan 6.020 mAh
Qalabka cusub ee 'Gionee M6S Plus' waa muuqaal cabbirkiisu yahay 6-inji kaas oo batterigiisa weyn ee 6.020 mAh uu ku taagan yahay ismaamul laba maalmood ah
Galaxy S8 + wuxuu leeyahay naqshad batteri oo lamid ah Galaxy Note 7
Batariga Galaxy S8 + wuxuu la mid yahay kan Note 7, kaas oo xaqiijin doona sharraxaadda in dhibaatooyinka ay sabab u tahay cillad, ee aan ahayn naqshadeynta
Waxay abuuraan baytar ka hortagaya soo noqnoqda dabka Galaxy Note 7
Koox cilmi baaris ah oo ka socota Jaamacadda Stanford University ayaa soo saaray nidaam ka hortagaya in batteriga lithium-ion dab qabsado sida ku xusan Xusuusta 7
Baaritaanka Samsung wuxuu soo gabagabeynayaa batteriga si loogu eedeeyo dabka Galaxy Note 7
Samsung ayaa ku soo gabagabeysay in batteriga uu ahaa dambiilaha ugu weyn ee qaraxyada iyo dabka keenay dib u soo celinta ugu dambeysa ee Galaxy Note 7
Dib u bilaw Facebook iyo Messenger hadda, qaladka awgood ayay batteriga uga siifayaan
Haddii aad ogaatay in maalmahan ka hor taleefankaaga gacanta uu ka dhammaaday batteriga sidii caadiga ahayd, waxaa u sabab ah Facebook iyo Messenger. Waxaan sharaxeynaa sida loo xaliyo.
Samsung Galaxy S8 wuxuu isticmaali doonaa batariyaal lamid ah kuwa Note 7 ah
Soo saaraha Kuuriya ee Samsung waa inuu hubiyaa inuu dib u adeegsado isla baytariyadii uu lahaa Galaxy Note 7.
Beddelka Galaxy Note 7s wali waxay leeyihiin cilad batari, inkasta oo ayan mar dambe qarxin
Riyooyinkii Samsung ayaa sii socda. Beddelka Galaxy Note 7 wuxuu sii wadaa inuu muujiyo dhibaatooyinka batteriga, in kastoo xaaladdan aysan sidaa u sii weyneyn
Samsung waxay ruqsad gaar ah ka heshay Google inay beddesho astaanta batteriga cagaaran ee Note 7
Waad ku mahadsan tahay astaanta batteriga cagaaran waxaad ku garan kartaa haddii aaladda Samsung Galaxy Note 7 aaladda amaan tahay iyo in kale. Samsung waxay weydiisatay Google rukhsad.
Ku hubi nolosha batteriga ee casrigaaga qaab soo jiidasho leh Bar Bar
Tamarta Barku waa barnaamij aan u baahnayn inuu noqdo xidid waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku darto boodh jiif ah barta xaaladda oo tusaysa nolosha batteriga
ZTE wuxuu ku dhawaaqay nubia N1 oo leh shaashadda 5,5,, kamarad 13MP ah iyo 5.000 mAh batari
Qalabkan cusub ee ZTE nubia N1 ayaa lagu dhawaaqay in loo soo bandhigi doono inuu yahay qalab gaari doona seddex maalmood oo batteri ah adeegsiga dhexdhexaadka ah.
[ROOT] Sida aasaasiga loogu habeeyo habka 'Doze' ee Android Marshmallow oo leh Naptime
Naptime waa barnaamij ROOT ah oo naga caawiya inaan sameyno qaabeyn dheeri ah oo ku saabsan habka Doze ee laga heli karo Android 6.0 Marshmallow
Maaraynta RAM-da 'OnePlus 3' waa mid lagu taageerayo nolosha batteriga
Go'aanka OnePlus 3 ee ah inuusan isticmaalin 6GB ee RAM waa si uusan u isticmaalin xad-dhaaf ah awoodda batteriga ee terminal-ka.
HTC 10 waxay lahaan laheyd shaashad Super LCD 5 iyo batari 3.000 mAh ah
Sida laga soo xigtay @evleaks, HTC waxay yeelan doontaa shaashadda Super LCD 5 iyo batari 3.000 mAh ah, iyadoo laga takhalusi doono xanta ku saabsan Super AMOLED.
Processor-ka cusub ee Mediatek Helio P20 wuxuu si weyn u wanaajin karaa ismaamulka mobilada dhexdhexaadka ah iyadoo laga fogaanayo culeyska maalinlaha ah.
Lenovo wuxuu soo bandhigayaa Vibe P1 Turbo oo leh shaashad dhererkeedu yahay 5,5 inji oo 1080p ah iyo batari 5.000 Mah
Haddii aad raadineyso taleefan leh shaashad 5,5 "iyo batari 5.000 Mah, waxaa macquul ah in Lenovo Vibe P1 Turbo uu yahay midka ugu habboon
Shirkad Ingiriis ah ayaa ka shaqeysa baytariga taleefannada casriga ah oo socon doona 7 maalmood
Shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa dadaal xoogan ugu jirta sameynta baytari socon kara ilaa 7 maalmood. Sirtaada? isticmaalka shidaalka.
Nolosha batteriga ee Samsung Galaxy S7 waxay socon doontaa laba maalmood hal mar oo lacag ah [waa la cusboonaysiiyay]
Waxaa la faafiyay sawir muujinaya nolosha batteriga ee Samsung Galaxy S7 oo gaari doonta laba maalmood walwal la’aan
Marka la barbardhigo taleefannada kale ee waaweyn ee shaashadda, LG V10 ma cabbiro sida ku cad tijaabooyinka la qaaday
Ulefone Power waa taleefan dhererkiisu yahay 5,5 inji oo leh batari aad u weyn oo dhan 6.050mAh oo u dhiganta $ 180
Haddii aad raadineyso terminal gaaraya afar maalmood madax-bannaanida, Ulefone Power waxaa adiga loogu talagalay batari dhan 6.050mAh
Ma rabtaa inaad si weyn u horumariso nolosha batteriga ee casrigaaga? Ka tirtiro barnaamijka Facebook
App-ka Facebook ee ku shaqeeya Android wuxuu burburiyaa isticmaalka batteriga iyo ilaha moobaylka. Waad sii wadan kartaa inaad Facebook ka hesho webka.
Ku wanaaji noloshaada batteriga Android adoo adeegsanaya Waqtiga Batariga
Qoraalka xiga waxaan kugula talinayaa codsi xasaasi ah oo naga caawin doona inaan kor u qaadno nolosha batteriga ee terminaalkeena Android.
ZTE wuxuu ku dhawaaqay Blade D Lux oo leh 5,5-inch HD bandhigay, 2GB RAM iyo 3.000mAh batari
Qiyaastii $ 166 waxaad ka iibsan kartaa tan ZTE Blade D Lux taas oo noqon karta mid ka mid ah kuwa casriga ah ee ballaarinta caalamiga ah.
Xiaomi Redmi 3 ayaa lagu shaaciyey 5-inch HD shaashad, Snapdragon 616 iyo batari 4.100mAh ah $ 106
Xiaomi Redmi 3 waxaa lagu gartaa shaashad 5-inji ah, octa-core Snapdragon 616 chip iyo batari 4.100 mAh ah
Barnaamijyada warbaahinta bulshada ayaa ah kuwa inta badan baatariga cuna sida uu sheegayo AVG
AVG waxay soosaartay daraasad muujineysa 10ka barnaamij ee ugu badan ee isticmaala batteriga oo saameyn ku leh waxqabadka.
CPU Spy Reloaded, Qalabka Naqshadeynta Qalabka si loo ogaado isticmaalka bateriga iyo kuleylka badan
CPU Spy Reloades waa barnaamij Naqshadeynta Qalabka ah oo naga caawiya inaan ogaanno dhammaan GPU, CPU iyo xogta batteriga iyo sidoo kale macluumaadka qalabka.
Maxaan ka filan karnaa batteriga leh Android 5.0 Lollipop?
Waxaan ku sharaxeynaa sababaha cimri dhererka batteriga ugu jira aalad leh Android 5.0 Lollipop
Sida loo qiyaaso batterigaaga Android
Qaar badan oo naga mid ah ayaa iska leh milkiile taleefan casri ah oo maalin kasta aan dhibaato ku qabno marka la eego nolosha batteriga, taas oo noo sii socon karta maalin maalmaha ugu fiican. Qiyaasta fududeyn doonta shaqadan ayaa ah in la ogaado haddii baytariga qalabkeena uu si fiican u qalabaysan yahay.
Android 5.0 OTAs ee Nexus ayaa loo daahiyay cilad ba'an oo la xiriirta isticmaalka batteriga sababtoo ah isticmaalka isku xirka WiFi
La soco xaaladda batteriga ee aalado badan mid ka mid leh Fursad
Dalabyo ka iman kara hal qalab si loo xakameeyo xaaladda batteriga ee dhammaan aaladaha Android ee aad haysato. Fikrad xiiso leh oo ku jirta beta.
Ku rakib Greenify si aad batteriga ugu keydiso taleefankaaga adiga oo aan lahayn mudnaanta ROOT
Greenify waa codsi kuu oggolaanaya inaad ku keydiso batteriga adiga oo seexinaya hababka qaarkood isla markaana aad ku hagaajineyso isticmaalkiisa. Uma baahnid inaad xidid si aad u rakibto
Cusbooneysiinta Adeegyada Google Play oo leh waxqabadka batteriga ka wanaagsan, Ciyaaryahanno badan oo saldhig u ah, iyo inbadan
Adeegyada Google Play waxay heshaa nooc cusub kaas oo keena horumarro nafaqo leh sida waxqabadka batteriga oo wanaagsan iyo taageerada multiplayer-ku-saleysan.
Dhibaatooyinka Adeegyada Google Play ee dila batterigaaga Android
Dhibaato ka jirta Adeegyada Google Play ayaa sababaya isticmaalka bateriga xad-dhaafka ah ee ku shaqeeya guntimaha Android.
Waa maxay ART ee loogu talagalay Android 4.4 macnaheedu wuxuu noqon doonaa marka la eego waxqabadka hagaajinta, ku-hadalka iyo nolosha batteriga
ART waa mashruuc ay Google ka shaqeynaysay in ka badan laba sano si loo kordhiyo waxqabadka, dareeraha iyo nolosha batteriga ee Android.
Ku hagaajinta RAM iyo isticmaalka batteriga Greenify
Greenify waa codsi bilaash ah oo ku yaal Play Store kaas oo noo oggolaan doona inaan ku keydinno batteriga iyo ilaha nidaamka adoo adeegsanaya barnaamijyada.